किन अशुभ मानिन्छ १३ नम्बर, यस्ता छन् अनौठा तथ्यहरु ! — Himali Sanchar
एजेन्सी – दुनियाँमा १३ अंकलाई अशुभ मानिन्छ । आखिर किन ? १३ नम्बरको रहस्य के छ ? मानिसहरु यो अंकको प्रयोग गर्नमै हिच्किचाउनुको कारण के छ ? अझ पश्चिमी देशहरुमा १३ अंक प्रतिको विकर्षण र त्रासले आम मानिसमा जरो गाडेको पाइन्छ ।
के भन्छ अंक विज्ञान ?